यसरी दाँत सफा र चम्किलो बनाउनुहोस् – दाङ खबर
यसरी दाँत सफा र चम्किलो बनाउनुहोस्
काठमाडौं, बैशाख ३१। दाँत स्वास्थ्य र सौन्दर्यका लागि अति महत्वपूर्ण मानिन्छ। दाँतले तपाईको स्वास्थ्य र सौन्दर्यको व्याख्या गर्छ। साहित्यमा पनि ‘अनारका दाना जस्तै मिलेका दाँतका पंक्ति’ चर्चित छ।
दाँत स्वास्थ्यको पनि महत्वपूर्ण हिस्सा हो। जब हामी कुनै पनि खानेकुरा खान्छौं, दाँतले राम्ररी चपाएको हुनुपर्छ। अहिले भन्ने गरिन्छ नि, ‘खाना बिस्तारै, राम्ररी चपाएर मात्र सेवन गर्नुपर्छ।’ हामीले खानेकुरा जति राम्ररी चपाउँछौं, पाचन यन्त्रलाई उत्तिकै सहज हुन्छ। खाएको खानेकुरा पच्छ। तर, दाँत नै रोगी भए ?
अक्सर हामी बिहान र बेलुकी खाना खान्छौं। खाना खाएपछि ब्रस गर्नुपर्छ। अन्य बेला पनि खानेकुरा खाइसकेपछि मुख कुल्ला गर्नुपर्छ। तर, यतिले मात्र पुग्दैन। दाँतलाई सफा र चम्किलो राख्न यसो गरौं।
१) घ्यूकुमारी र ग्लिसरिन – घ्यूकुमारीले स्वास्थ्य र सौन्दर्य बढाउँछ। घ्यूकुमारी दाँतलाई सेतो पार्ने गज्जबको प्राकृतिक औषधि पनि हो। यसको टुथपेस्ट यसरी बनाउनुस्, एक कप पानी, आधी बेकिङ सोडा, एक चम्चा घ्यूकुमारीको धूलो, एक चम्चा ग्लिसरिन, तीन थोपा कागतीको रस।
यी सबै कुरालाई मिसाएर पेस्ट तयार पार्नुस्। यसले दिनदिनै दाँत सफा गर्नुस्। यो प्राकृतिक पेस्टले दाँतलाई सफा पार्नुका साथै, पहेलोपना हटाउँछ र गिजाको पीडाबाट मुक्ति दिन्छ। स्वस्थ र चम्किलो दाँतका लागि यो निकै उपयोगी हुन्छ।
२) बेकिङ सोडा – भान्सामा अनि सौन्दर्यका लागि बेकिङ सोडा प्रयोग गरिन्छ। दाँतको पहेलोपन हटाउन पनि यो असरदार हुन्छ। एक चम्चा बेकिङ सोडामा एक चिम्टी नून मिसाउनुस्। दिनदिनै दुईचोटी ब्रसमा यसको धूलो हालेर दाँत सफा गर्ने गर्नुस्। यसो गर्नाले दाँतको पहेलोपन हराउने गर्दछ।
३) जिब्रोको सफाइ – दन्त चिकित्सकहरुका अनुसार स्वस्थ र मजबुत दाँतका लागि दैनिक ब्रस गरिसकेपछि जिब्रो पनि राम्रोसँग सफा गर्नुपर्छ। दिनमा कम्तीमा पनि दुई पटक ब्रस गर्नुपर्छ र ब्रस गरेपछि नुनपानीले कुल्ला वा माउथ वास गर्नुपर्छ। यसले हाम्रो दाँत र गिजाहरुलाई ब्याक्टेरियाबाट बचाउँछ।
४) ब्रसको समय – ब्रस गर्नका लागि कुनै पनि मानक समय हुँदैन। तर, दन्त चिकित्सकहरुले कम्तिमा दुई मिनेटसम्म ब्रस गर्नुपर्ने सल्लाह दिन्छन्। यसले मुखभित्रको सतहबाट विभिन्न खाले ब्याक्टेरिया निस्कन्छ। यसले दाँतमा हुने क्षतिलाई पनि रोक्छ।
५) टुथब्रस – तीन महिनाभन्दा धेरै समय एउटै ब्रस प्रयोग नगर्नुहोस्। ४ महिनाभन्दा धेरै प्रयोग गर्दा पनि तपाईको ब्रस खराब नभएको हुनसक्छ। तर, तपाईंले त्यसलाई छोडेर नयाँ ब्रस किन्नुपर्छ। त्यसैगरि बजारमा विभिन्न आकार, प्रकार, लम्बाई र गुणको टुथब्रस आउँछ। तर, दन्त चिकित्सकका अनुसार सही टुथब्रसको लम्बाई २५.५ देखि ३१.९ मिलिमटर हुनुपर्छ र चौडाई ७.८ देखि ९.५ मिलिमिटर हुनपर्छ।
दाँतमा दाग देखिए के गर्ने ?
दाँतमा कालो दाग देखिएको छ, खाना फस्न थालेको छ, चिसो तातो खाँदा दाँतमा झनझनाहट हुन्छ वा गिजाबाट रगत आउन थालेको छ भने दन्त चिकित्सकसँग भेटेर उचित उपचार गर्न ढिला नगर्नुहोस्। तर, यसको उपचार घरमै पनि गर्न सकिन्छ। घरेलु उपचार यसरी गरौं।
१) तील र ल्वाङको तेल – एक चम्चा तीलको तेलमा ३–४ थोपा ल्वाङको तेल मिसाएर हरेक बिहान खाली पेटमा यस तेलले कुल्ला गर्ने। यसको साथै तील र ल्वाङको तेललाई बराबर मात्रामा मिसाउने। एउटा कटनको डल्ला यो तेलमा चोपेर दुखेको दाँत वा किराले खाएर खाली भएको दाँतको बीचमा राखेर १० देखि १५ मिनेट सम्म दबाएर च्याप्ने।
यस विधिलाई दिनको ३–४ पटक प्रयोग गर्नका लागि तील र ल्वाङको तेलको मिश्रणमा ३–४ ओटा कटनको बललाई चोपेर एउटा कन्टेनरमा राख्ने। त्यसपछि हरेक पटक खाना खाएपछि यस कटन बललाई १०–१५ मिनेटका लागि दाँतको बीचमा च्यापेर राख्ने। यसो गर्नले दाँतको दुखाईलाई तुरुन्तै ठीक गर्नुका साथै दाँतमा हुने किरालाई सधैँका लागि निकालिदिन्छ।
२) लसुन – ३–४ ओटा लसुनको केस्रालाई मसिनो बनाएर काट्ने। यसमा एक चिम्टी रक सल्ट राखेर मज्जाले मिसाउने। अब यस लसुनलाई सडेको दाँतको बीचमा हालेर १० मिनेटका लागि च्यापेर राख्ने। बिहान बेलुका एक एकपटक यो विधि प्रयोग गर्नाले दाँतमा भएको ब्याक्टेरिया खत्तम हुन्छ र दाँतको कालोपन पूरै हटेर जान्छ।
३) फिटकिरी – जस्तोसुकै दुखाईलाई पनि कम गर्न फिटकिरी अचुक औषधी मानिन्छ। एक कप पानीमा एक टुक्रा फिटकिरी डुबाएर १–२ मिनेटका लागि राख्ने। १–२ मिनेटपछि पानीलाई चम्चाले चलाएर फिटकिरी निकाल्ने। अब पानी मुखमा राखेर ३–४ मिनेटका लागि घुमाइराख्ने। दिनमा ३–४ पटक यसो गर्दा दाँतको दुखाई सधैँका लागि हट्छ।
४) नून–पानीले कुल्ला गर्ने – एक कप मनतातो पानीमा एक चम्चा नून मिसाएर मुख कुल्ला गर्दा दाँत दुखेको निको गर्छ। नून–पानीले मुखमा भएका फोहर खानेकुरा हटाएर सफा गरिदिनुका साथै दुखाई पनि कम हुन्छ।
५) निमपत्ता – ताजा निमको पातलाई पखालेर नुन मिसाई पिसेको लेदोलाई दाँत दुखेको ठाउँमा लगाउँदा आराम हुन्छ। निमको पातमा व्याक्टेरियाविरुद्ध लड्ने गुणसमेत हुने भएकाले निमपत्ता दुखाई कम गर्ने प्रभावकारी घरेलु उपाय हो। हरियो निमपत्ता नभएमा सुकेको पातलाई पानीमा पकाएर मनतातो पानीले कुल्ला गर्न सकिन्छ। दैनिक तीनपटक मन तातो पानीले कुल्ला गर्नुपर्छ।
बच्चाहरुको दाँत कसरी बचाउने ?
आमाबुबाहरुले बच्चाहरुको दूधे दाँतलाई महत्वपूर्ण ठान्दैनन्। यसको सट्टामा अर्को दाँत आउने भएकोले त्यसलाई महत्व नदिइएको हो। तर, दूधे दाँत पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ किनकि दूध दाँतले स्थायी दाँत ओगट्ने ठाउँ ओगट्छ, जसले पछि आउने दाँत बाङ्गो टिङ्गो हुन दिँदैन।
यसले चपाउन मद्दत गर्छ। प्रष्ट बोल्न मद्दत गर्छ। ठूलो मान्छेको दाँतमा जस्तै बच्चाहरुको दाँतमा पनि मुखको किटाणुको एसिड उत्पादन गरेर दाँतको खनिज पदार्थ नष्ट गर्छ। जसले गर्दा दाँतमा प्वाल पर्छ। हामी त्यसलाई दाँतमा किरा लागेको भन्छौं।
१) दाँत निस्कनुअगाडि नै गिजालाई सफा भिजेको कपासले सफा गरी राख्नुपर्दछ। पहिलो दाँत निस्केदेखि नै दाँत माझी दिनुपर्दछ। यो क्रम बच्चाले राम्रोसँग थुक्न नजानेसम्म र फ्लोराइडयुक्त मञ्जन चलाउन नहोउञ्जेलसम्म जारी राख्नुपर्दछ।
२) चक्लेट, टफी जस्ता गुलिया र च्याप च्याप खानेकुरा तथा दाँतमा टाँसिने खानेकुरा जस्तै चाउचाउ, बिस्कुट, चिप्सहरु खान दिनुहुँदैन। पेय पदार्थ, जुसहरु पनि सकेसम्म कम खुवाउने गर्नुपर्दछ।
३) दाँतमा किरा लाग्न नदिन दिनमा दुइपटक दाँत माझ्नुपर्छ। बच्चाहरुले राम्रोसँग दाँत माझ्न सक्दैनन्। त्यसकारण कम्तीमा एकपटक आमबाबुले राम्रोसँग दाँत माझी दिनुपर्छ। वर्षमा दुइपटक दन्त चिकित्सक कहाँ गएर दाँत जँचाउनुपर्छ। स्रोत लोकपाटी
Prev‘जात्रै जात्रा’बाट प्रदिपलाई सफलताको ह्याट्रिक गर्ने अवसर
Nextप्रम ओलीबाट विन विन मोनुमेण्ट भ्रमण
रुकुममा मदिरा व्यवसायका लागि १ अर्ब लगानी’
गोरु संकलनको ट्राञ्जिट प्वाइन्ट सरयो